The Rohingya News Bank : သံအမတ်ကြီး
Showing posts with label သံအမတ်ကြီး. Show all posts
မြန်မာဆိုင်ရာ ကန်သံအမတ်ကြီးအဖြစ် Thomas L. Vajda ကို အဆိုပြုတာဟာ Trump လုပ်ခဲ့သမျှ အကောင်း ဆုံးဖြစ် - Priscilla Clapp
ဗွီအိုအေ ( မြန်မာပိုင်း)
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်အသစ်အဖြစ် သမ္မတ Donald Trump အဆိုပြုထားတဲ့တောင် အာ ရှဒေသဆိုင်ရာ ဒု-လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Thomas L Vajda ဟာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘယ်လောက်ထိ ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်သိထားလဲ၊ သူ့အရင် သံအမတ်တွေ စွမ်းဆောင်ခဲ့တတာမျိုး ထက် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးမှာ ဘာတွေပိုပြီး ဆောင်ရွက်နိုင်မလဲ။ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန် အကြီးတန်း သံ တမန်ဟောင်းPriscilla Clapp ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်း ထားတဲ့ မအင်ကြင်းနိုင်က တင်ပြမှာပါ။
Labels: 2020, mm, Thomas L Vajda, မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ, သတင်း, သံအမတ်ကြီး, အမေရိကန်
ရခိုင်ကိစ္စ တင်းမာမှု ရှိနေသော်လည်း မြန်မာနှင့် နီးနီးကပ် ကပ် ဆက်ဆံသွားမည်ဟု အမေရိကန်သံအမတ် ပြောကြား
ဇန်နဝါရီ ၃၁ ။ ။ ရခိုင်အကျပ်အတည်းနှင့်ပတ်သက်၍ နောက်ဆက်တွဲ အခြေအနေဆိုးကျိုးတစ်ခုနှင့် မြန်မာစစ်တပ် အရာရှိကြီးများအပေါ် ပစ်မှတ်ထားပြီး ဆန်ရှင်ချမှတ်မှုတို့ ရှိနေလင့်ကစား ဝါရှင်တန်အစိုးရအနေဖြင့် မြန်မာနှင့် အခိုင်အမာ ဆက်လက် ဆက်ဆံပတ်သက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး စကော့ မာစီယယ်က ရန်ကုန်မြို့တွင် ပြု လုပ် သည့် ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုမှာ အလေးပေး ပြောဆိုသွားခဲ့သည်။
Labels: 2020, mm, ဆက်ဆံရေး, မြန်မာ, မဇ္ဈိမသတင်း, သတင်း, သံအမတ်ကြီး, အမေရိကန်
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် သံအမတ်ကို ဆင့်ခေါ်ပြီး မြန်မာ ဘာတွေ ပြောခဲ့လဲ
ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၆ ၂၀၁၉
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက် နယ်ကျွံဝင်လာလို့ ဆိုပြီး ဖမ်းခံထားရတဲ့ မြန်မာ နယ်ခြားစောင့် တပ်ဖွဲ့ဝင်အရေး ကောင်စစ်ဆိုင်ရာ စကားပြောခွင့်ရဖို့ ဒါကာမြို့ မြန်မာသံရုံးက လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ မြန်မာအစိုးရ နိုင်ငံခြားရေးရုံးက ပြောပါတယ်။
Labels: 2019, mm, ဆင့်ခေါ်, မြန်မာ, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, ဘီဘီစီ မြန်မာ, သတင်း, သံအမတ်ကြီး
ရခိုင်ပြည်နယ် ပြဿနာများကြောင့် မြန်မာအစိုးရ အပေါ် အရေးယူဖိအားပေးမည်မဟုတ် ဟုဆို
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားနေသောပြဿနာများကြောင့် မြန်မာအစိုးရအပေါ် အရေးယူမှု၊ ဖိအားပေးမှုများ လုပ် ဆောင်သွားမည်မဟုတ်ဘဲ အကောင်းဘက်သို့သွားနိုင်အောင် နှစ်နိုင်ငံအစိုးရ ပူးပေါင်းဆောင် ရွက် သွားမည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Ichiro Maruyama ကပြောသည်။
လင့်၊ရခိုင်ပြည်နယ် ပြဿနာများကြောင့် မြန်မာအစိုးရအပေါ် အရေးယူဖိအားပေးမည်မဟုတ် ဟုဆို
Labels: 2019, H.E. Mr. Ichiro, mm, Video, ဂျပန်, မြန်မာ, ရခိုင်, သံအမတ်ကြီး